Darajo-ka-xayuubinta Cabdalla Cabdalla maxay ku salaysan tahay? - BBC News Somali
Darajo-ka-xayuubinta Cabdalla Cabdalla maxay ku salaysan tahay?
Hay'adda sirdoonka Soomaaliya
Waayahan dambe, waxay warbaahinta iyo baraha bulshada aad u hadal hayeen xurguf uu ku lug leeyahay taliye ku xigeenkii hore ee Hay'adda Sirdoonka Qaranka ee Soomaaliya (NISA), Cabdalla Cabdalla, oo maalin ka hor laga xayuubiyay dhamaan darajooyinkii ciidan.
Haddaba waxaan qormadan ku eegeynaa waxa uu yahay khilaafla u dhexeeya Cabdalla Cabdalla iyo hoggaanka hay'adda NISA.
Mas'uulkan muddo dhowr sano ah ayuu u shaqeynayay NISA. Inkasta oo dowladdu aysan sheegin sababta xilka looga qaaday, ayaa haddana Cabdalla Cabdalla iyo Taliye kuxigeenkii kale ee hay'adda (NISA) Cabdiqadir Maxamad Nuur, oo Jaamac ku magac-dheer, waxaa labadaba la casilay ka dib laba toddobaad oo qaraxyo is xig-xigay lala beegsaday agagaarka madaxtooyada, kuwaas oo ay dad ku dhinteen, kuna dhaawacmeen.
Jaamac waxaa loo magacaabay inuu la taliye u noqdo guddoomiyaha Baarlamaanka, laba maalmood markii xilka laga qaaday.
Xigashada Sawirka, Jowhar.com
Jaamac wuxuu iminka la taliye u yahay guddoomiyaha Baarlamaanka
Xil ka qaadista ka dib, Cabdalla Cabdalla waxaa uu ka hadlay warbaahinta, waxaana uu si qota dheer uga hadlay xaaladda hay'adda NISA, isagoo xitaa sheegay in xafiiskiisa la jabsaday.
Cabdalla ma ahayn nin warbaahinta la hadla, laakinse wareysi uu siiyay VOA ayuu ku sheegay in 18-kii bilood ee la soo dhaafay uu ku dadaalay in "madaxweynaha aan la dhumin oo aan la go'doomin,oo xaq u yeesho waxa waddanka ka jira".
Warqaddii Jaamac lagu magacaabay
Dunida inteeda kale, sirdoonka waa hay'adda ugu muhiimsan dalka, taasoo ka shaqeysa amniga waddanka.
Jen Maxamad Ibraahim Guubir, oo ka tirsanaan jiray ciidanka Soomaaliya, ayaa sheegay inay "dembi qaran tahay" in mas'uul sare oo ka tirsan hay'adaha nabadsugidda uu warbaahinta kala hadlo waxyaabo aan loo igman.
Waxaa uu intaasi ku daray Jen Guubar in madaxda amniga ay maraan dhaar ah inay xafidi doonaan sirta qaranka, hadii ay ka baxaana, ay micnaheedu tahay inay ka baxeen "ballantii ay qaadeen".
Ka dib muranka dheer ee u dhexeeyay Cabdalla Cabdalla iyo hoggaanka hay'adda NISA, ayaa ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya wuxuu darajadii ciidan ka xayuubiyay Cabdalla Cabdalla.
Waxaa uu leeyahay "in kasta oo ay khalad tahay in taliye hore oo amni uu sirta dowladda kala hadlo warbaahinta, aysan haddana sax ahayn in si fudud darajo ciidan lagu xayuubiyo. Waxay ahayd in guddi qaran uu go'aankaasi gaaro, baaritaan qoto dheer ka dib".
Da'diisu waxay ahayd 61 jir waxaana dhawaan loo doortay in uu noqdo musharaxa xisbiga talada dalkaasi haya
Xiisad ayaa dhalatay kaddib marki 30 kiilo oo dahab ah ah laga helay qunsuliyadda Isutagga Imaaraadka Carabta.